Vavaka hampisarahana ny olona roa? [Fisarahana farany]
Vavaka mba hampisarahana ny olona roa rapido San Alejo dia mihatra amin'ireo toe-javatra ireo izay misy ny fianakavianantsika, ny fitoniana ara-pihetseham-po sy ara-pihetseham-po na ny fiadanan'ny zanatsika na ny mpiara-miasa amintsika.
Ohatra, amin'ny tranga iray manokana izay katsahana ny mpiara-miasa amintsika ny asa izay heverintsika fa tsy hahasoa fa kosa, dia manimba azy, dia manan-kery io fehezanteny io.
Amin'ireo tranga izay tena ampiasainy azy dia ny fanavahana ilay mpiara-miombon'antoka taloha amintsika amin'ny mpiara-miasa amin'izao fotoana izao izay mikasa ny hamerina ny fifandraisanay na hanakana ny mpiara-miasa tsy handao anay ho olon-kafa.
1 Mivavaka foana ve ny vavaka mba hampisaraka ny olona roa?
1.1 Ny vavaka ho an'i San Alejo hanavahana olona roa
1.2 Ny vavaka hanasaraka ny olon-tiana
1.3 Ny vavaka ho an'ny olon-droa mba hiady sy hifankahala
1.4 Vavaka famaranana farany
2 Afaka mivavaka ny vavaka ve aho mba hampisaraka ny olona amin'iza?
Mivavaka foana ve ny vavaka mba hampisaraka ny olona roa?
Ny fitiavana dia zavatra sarotra tokoa.
Raha tsy marina ny fitiavana eo amin'ireo olona roa ireo, dia hivavaka ny vavaka.
Izay fitiavana malemy rehetra, tsy misy fahatsapana na firehetam-po dia mora simba amin'ireto vavaka.
Nifarana tamin'ny tsy fanarahan-dalàna izy ireo, ary ny fitiavana ny fitiavana ary ny fifandraisana rehetra misy eo amin'ny olona roa.
Ny mpivady manana fitiavana irery ihany no hahavelona azy ireo.
Raha tsy izany dia ho afaka misaraka ny olona tia sy sipa ary manambady amin'ny andro vitsivitsy ny vavaka.
Ny vavaka ho an'i San Alejo hanavahana olona roa
Ianao izay manana domaine misaraka.
Ny tsy mety rehetra izay manodidina ny olom-boafidin'ny Tompo, mangataka aminao aho hanaisotra (Ny olona voalohany no voatonona) avy amin'ny (Io anarana manaraka io no voalaza).
Ny fizotrany sy ny fiainany Ka tsy hinoany manisy ratsy antsika intsony. Manontany anao aho, San Alejo, ary toy izany koa ny fitantanako hahatratra ny fiainany.
Miala amin'ny toy izany koa.
Mba tsy hahatratrarana ny fiaraha-miasa miaraka, ny tsy hahatongavan'izy ireo hiaraka, na eo amin'ny latabatra picnic, na seza any amin'ny seza fitsaharana, na ao anaty efitrano fandraisam-baho mangatsiaka, na amin'ny fandriana tsy matory Tsy mahatsiaro toromarika, maharikoriko ary manala baraka, ary indrindra manontany anao aho.
Tsy afaka mifikitra amin'ny fitokisana izy ireo. San Alejo, apetraho tsara ireo.
San Alejo efa taloha, raha be fitahiana be dia mangataka aminao aho mba hanome ahy ny fangatahako haingana araka izay azo atao, ary ny namako hiverenany sy hody miaraka amin'ny fianakaviany.
Misaotra anao aho tamin'ny fihainoanao ahy, ohatra fakan-tahaka an'i San Alejo, ary omeko ny teniko hanaparitaka ny vavakinao raha omenao hody indray izahay mianakavy.
Enga anie ny fanahy izay angatahiko aminao misaraka Aza miverina hitsangana amin'ny fiainako Amena.
Misy tranga tsy ahafahantsika mahita olon-droa miaraka, na inona na inona antony sy irianay misaraka izy ireo, hahatratr'izany milamina sy amin'ny fomba mahomby tsy misy tsara noho ny vavaka ho an'i San Alejo.
Amin'ity fehezanteny ity dia tokony ho manana ny anaran'ny olona roa izay tiantsika hisaraka izahay satria tsy maintsy lazainao eo afovoan'ny fehezanteny.
Vavaka iray miavaka tokoa izany izay tsy anelanelan'ny roa tonta ny resaka, tsy maniry hifampizara fotoana amin'ny orinasa hafa intsony, ka manelingelina ny fisian'ireo mpivady, hany ka tsy maniry ny hihaona intsony izy ireo ary ka indray mandeha dia mankahala ny tenany ka hatrany amin'ny fisarahana.
Io vavaka io dia mahery tokoa.Noho izany dia tsy natao hampisaraka mandritra ny fotoana maharitra ny mpivady fa kosa ny famaritana dia mamaritra.
Ny vavaka hanasaraka ny olon-tiana
Oh, ry Santa Muerte, tonga aminao aho hangataka aminao hanampy ahy, diso fanantenana aho amin'ny fiainana, nomeko ireo taona tsara indrindra nataoko lehilahy iray tiako fa tafasaraka amiko handao miaraka amin'ny vehivavy hafa manasazy ilay vehivavy mandratra ahy. Te handrava ny tokantranoko tsy hanana (anaran'izay olona izay izy) mba hiverenany amiko mandrakizay.
Santa Muerte, ataovy (anaran'ny olona izany) manomboka mankahala sy tsy matoky azy, fantaro fa mampiasa izany izy ireo, ny sitrapony rehetra dia ny volany ary ny fahafinaretany miaraka aminy hahaliana azy, mangataka aminao aho mba hampisaraka ny malalako amin'ny zavatra rehetra izay mampisaraka azy amiko, dia ny ranomaso be noho ny iray hafa, lasa mijaly mafy ho azy.
Oh, ny zazavavy fotsy hampiasa ny herinao hanafahana ilay vehivavy hafa amin'ny lalao, Santa Muerte mangataka aminao aho mba hitondra (anaran'ity olona ity) eo anoloako izao dia ampio aho ho malemy fanahy toy ny zanak'ondry kely, manadino ny anaran'ny vehivavy iray hafa dia manamboatra tsindrin-tsakafo eo amin'ny tongotro sy mangataka famelana.
Oh, ataon'i Santa Muerte izany (anaran'io olona io) tsy mahatohitra ny faniriako, moa ve izany ao an-tsainy dia mieritreritra ahy indray mitalaho famindram-po, famelan-keloka mitaky fitiavana fa afaka sambatra indray isika toy ny tsy nandao ahy irery i Santa Muerte .
Lovers Fantatra fa olona fahatelo miditra an-tsehatra amin'ny fifandraisana milamina izy ireo ary izy ireo dia olana mahatsiravina izay tokony halamina am-pahendrena.
Iray amin'ireny fomba ireny ny fanaovana vavaka manokana izay tanterahana ny tanjona tiana hahatafiditra azy.
Ity vavaka ity hanasaraka olona roa (mpitia) dia nahazo devoly maro be noho ny fahombiazany.
Rehefa manana hevitra mazava ianao, dia manohy mivavaka, azo atao amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza misy anao, dia arahana ny hanaovana azy amin'ny fahatsoram-po lehibe ary, toy ny amin'ny raharaha rehetra amin'ny vavaka, miaraka amin'ny finoana lehibe.
Ny vavaka ho an'ny olon-droa mba hiady sy hifankahala
Saint-cypianian, ianao izay mahery indrindra amin'ny mahery rehetra, miangavy anao aho mila ny fanampianao, ny fitiavanao, samy natao hiaina mifanakaiky isika roa, mangataka aminao aho raha te hiala eto 1 ka hatramin'ny 2, mila ny herinao aho ampiasaina hampisaraka ireo olona roa ireo.
Tsy te-hahita, mijereva tsara, samy miaraka. Fantatro fa afaka mifehy ny fitiavana ianao ary mahalala fa misy olona tsy nateraka mba hiaina tahaka ny tsirairay, manana ny fahatokiana fa tsy tokony hiaraka izy ireo, nianiana aho.
Ry mahery Saint-cusanian, ianao no mahery ny mahery, mangataka aminao aho mba hampiasa ny herinao, ka mba hisaraka ireo olona ireo dia tsy afaka hiara-mandeha, tsy mijaly intsony izy ireo, fantatro fa mila misaraka izy ireo, tsy an'ity mpivady ity ohatra ny fahasambarana.
Mivavaka izao vavaka izao aho mba hanavahana ireo olona tsy sambatra, fantatro fa mety ho sambatra miaraka amiko izy, fantatro koa fa hivavaka tsara ity vavaka ity, ka ho izany.
Tsy mifankahala izahay, olona milamina izay mino ny fifanakalozan-kevitra amin'ny fotoana rehetra ho fomba hamahana ny olana na inona na inona izy ireo.
Ankehitriny, amin'ity heviny ity, ireo fehezanteny ireo dia natao miaraka amin'ny finiavana miteraka fankahalana amin'ireo tranga ireo izay mihanaka angovo miiba Manadino olona mahay.
Angovo isika ary izany no mahatonga antsika tsy maintsy mikarakara ireo manodidina antsika ary manimba ny tontolo iainantsika aza.
Raha toa ka mivavaka sy mankahala ny tsirairay avy amintsika ny vavaka ataonay amin'ny maha-mpianakavy antsika, ity vavaka ity, satria ny angovo mahery vaika dia hitondra hery bebe kokoa ao an-tokantrano mahasarika ny valin'ny vavaka ataontsika.
Vavaka famaranana farany
Atolotro ho an'ny olona ireto teny ireto ...
Manodidina ny saiko izao aho izao, ka rehefa vita izany dia tsy misy afa-tsy fankahalana ary tsy afaka ny hiara-hiaina miaraka intsony izy ireo.
Enga anie ny tolona ho ampahany amin'ny fiainan'izy ireo manomboka izao ary, Rehefa tonga ny ora voatondro, misaraka tsy hisaraka mihitsy.
Fa ny zavatra noforonin'izy ireo amin'izao fotoana izao dia tsy mitovy amin'ny matoatoa amin'ny tsy mitandrina ary enga anie ny lalan'izy ireo handeha amin'ny lalana mifanohitra amin'ny ho avy ka tsy hihaona intsony izy ireo.
Enga anie izy ireo hilentika ao anaty na lalina kokoa ny fanahiny ary hahazo ilay zavatra angatahiko amin'ny alàlan'ny finoana.
Amin'ity tranga ity dia tsy mangataka ny fankahalana na fitsaharana vetivety isika.
Amin'ity fehezanteny manokana ity dia mila ahatantsika a fisarahana tanteraka.
Azo ampiharina amin'ny tranga maro izy io eo amin'ny fifankatiavana am-pitiavana sy amin'ny fisakaizana madio sy amin-kitsimpo.
Misy olona izay, na dia manome fahatsapana ho manana finiavana tsara aza izy ireo, dia ento foana miaraka aminy ny tendrombohitry ny angovo ratsy na fikasana miafina izay tsy tsara.
Ato amin'ireto vavaka ireto dia ity vavaka ity irery ihany no mahomby sy mahomby.
Afaka mivavaka ny vavaka ve aho mba hampisaraka ny olona amin'iza?
Azonao atao ny mivavaka amin'olona tsy misy fetra.
Ampiasao fotsiny anefa ny vavaka rehefa tena ilaina. Aza manandrana misaraka amin'ny mpivady tsy misy antony.
Ireo fombafomba ireo dia matanjaka ary tsy tokony hampiasaina amin'ny tanjona rehetra.
Ampiasao fotsiny ny vavaka mba hampisarahana ny olona roa sy ny fisarahana haingana amin'ny tranga tena ilaina.